बिदेशी ड्रिङ्क्स फुकुवा, स्वदेशी मदिरा पोखुवा ! Headline Humor
कोभिड- १९ को महामारीबीच एसिया बन्दैछ भूराजनीतिको ‘हटस्पट’ ‘हटस्पट’ बनाउनने कार्यमा स्थानीय देशका ठेकेदारहरु सक्रिय ! स्पेनमा साझा पार्टीको राष्ट्रिय समिति गठन, अध्यक्षमा गोरखाका दीपक चुनावी खर्चका लागि डोनरको लिस्ट
यातायात कार्यालयमा के बुझाउने, कर कि कमिसन ?
-केशबराज गजुरेल यातायात कार्यालयको कार्यशैलीले सेवाग्राही आजित भए । उनिहरुले केहि गर्न सकेनन् ! रिस फेर्ने औषधीको रुपमा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई बोलाए ! दलबल लिएर शाहीजी यातायात कार्यालय पुगे । कर्मचारी
न लाले तिमिलाई न काले तिमिलाई, बिनाअर्थ देशमा उचालेँ तिमिलाई !
निको नहुँदै अस्पतालबाट विदा भए ट्रम्प, छिट्टै चुनाव प्रचार सुरु गर्ने प्रचारमा सहभागी प्रत्येकलाई १-१ वटा भाईरस उपहार दिने ! नीजी विद्यालयको ‘शुल्क आतङ्क’: अनलाइन कक्षामा क्यान्टिन र बसभाडा समेतको
डा. केसीको जीवन-रक्षा गर्न नागरिकको दबाब, प्रदेशको राजधानी तोक्न सुझबुझको अभाव !
एकैदिन सङ्क्रमितमध्ये ५५-६० प्रतिशत काठमाण्डू उपत्यकाभित्रका मात्रै, यसले के सङ्केत गर्छ ? कोरोनासँग भागेर होइन, मिलेर बस्नुको मज्जा ! सुडानको विद्रोही समूह र सरकारबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर स्वार्थ अनुकुल
एउटा मन्त्रालय थप्दा यति खर्च बढ्छ, मंत्रीलाई बुलेटप्रुफ कार, देशलाई रिणको भार !
प्राधिकरणको चिन्ता : रातमा खेर गइरहेको करोडौंको बिजुली के गर्ने ? अफ्रिकाको घाना र बुरुण्डीतिर अनलाईन सप्लाई गर्ने सरकारको योजना ! बली दिन भारततर्फ लैजाँदै गरिएका दुई किशोरीको सीमा क्षेत्रबाट
कंगोमा नेपाली सैनिकमाथि सैनिक अधिकृतको कुटपिट कुटपिटको बदला बुटपिटको सम्भावना ! ‘सच्चा ओली सडकमा, नक्कली ओली बालुवाटारमा’ भन्दै प्रदर्शन गर्नेहरु पक्राउ ‘सच्चा ओली सिंहदरबारमा, कच्चा ओली घरघरमा’ भन्न पर्ने !
पिल्लर नं ११ ले सोध्यो- ‘यता 是这样 छ, उता कैसा है ?’
नेपाल सरकारले भन्यो : ‘हुम्लामा चीनले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको छैन’ चीन सरकारले भनेन : ‘काठमाण्डौमा कुटनैतिक सीमा अलिअलिमात्र मिचिएको होला !’ रोहिङ्या शरणार्थीका लागि नेपाल ‘सेफ ल्याण्ड’ बन्ने
‘अख्तियारमा फेरि अर्को गुलाम नियुक्तिको खेल हुँदैछ’- ओम प्रकाश अर्याल बादशाह र मिस्सी मिलेपछि गुलामको के खेल होला र ! मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पक्का, प्रधानमन्त्रीले दिए तीन विकल्प मिलेसम्म भागवण्डा, नमिले
कमरेट बामदेव गौतम जनताले चुनाव जिताएको माननीय हुन नसकेपनि नेताले तानेको ताननीय भएकोमा बधाई छ ! ताननीयमा भएरै होला, वहाँको सफत लिने शैली पनि जाननीय थियो । जाननीय अर्थात् आफैँ
अन्तत: नेपालमा रेल यात्रा पनि आयो रेलै रेलामा रेल आयो, दुईचार दिन गफ गर्ने खेल आयो ! ठप्प विकास निर्माण : नेपालका साइट खुलेनन्, श्रमिक भारततिर कोरोना र कमिसनको चेपुवमा